Ngathi-iWuxi Flyt New Energy Technology Co., Ltd.
IWuxi Flyt eNtsha yeTekhnoloji yeTekhnoloji Co., Ltd.
Itroli yomoya ethe tyaba
I-FK Turbine yomoya ethe tyaba
S Imoya ephendulwa ngokuthe nkqo
Nkqo Wind Turbine
FH nkqo Wind Turbine
I-FS nkqo Wind Turbine
I-Turbine yomoya ethe nkqo
Q nkqo Wind Turbine
R nkqo Wind Turbine
I-Wuxi Flyt New Energy Technology Co., Ltd isekelwe kwi-Jemani.
Sizinikezele ekunikezeleni abathengi bethu iimveliso ezikumgangatho ophezulu kunye neenkonzo ezonelisayo.
I-Wuxi Flyt iNew Energy Technology Co, Ltd., ngumenzi wobuchwephesha beenkqubo ezincinci zomoya kunye naphakathi kunye nezinto ezifanelekileyo. Senze uphando kunye nokusetyenziswa kweeinjini zomoya ezincinci ukusuka kwi-100w-50kw iminyaka emininzi. Isiseko esikhulu semveliso esigubungela indawo ye-1000 yeemitha zesikwere ibekwe kwisixeko saseWuxi, kwiPhondo leJiangsu, kwiikhilomitha ezili-120 ukusuka eShanghai kunye neekhilomitha ezingama-200 ukusuka eNanjing, ngenethiwekhi yothutho yesandi sendlela yamanzi, indlela evakalayo, uloliwe kunye nesikhululo seenqwelomoya.
Inkampani yethu ngoku inenani elikhulu labasebenzi abaqeqeshiweyo, iindawo eziphambili zokuvelisa kunye nokuvavanya, ngakumbi itonela yomoya enokudala iimeko ezinqwenelekayo zokuphuhlisa kunye nokuvavanya iimveliso kwaye ngaphezulu kweminyaka iye yenza inkqubo emanyanisiweyo yoyilo, imveliso, ukuthengisa, ukufakela, ukulungisa ingxaki nasemva kwentengiso. Iinjini zomoya zii-CE, ziqinisekisiwe nge-ISO kwaye amalungelo awodwa omenzi wechiza awongwa. Ilungelo lepropati yabanini kunye nentsebenziswano ebanzi kurhwebo lwamanye amazwe lithetha ngomgangatho, ukuthembeka kunye nozinzo kwiimveliso zethu. Sineeprojekthi zeinjini yomoya kulo lonke elaseTshayina nakumazwe aphesheya ezo zamkelwe kakuhle.
Isiteyitimenti somsebenzi wethu
Singabenzi beemveliso ezintsha ngokukhawuleza.
Sinikezela ngeendlela zokuqinisekisa abaqulunqi bemveliso;
Singumvelisi ukubonelela ngesiseko esisemgangathweni.
Sivumela umthengi ukuba azive ngamava afanelekileyo oyilo, bancede bafezekise ixabiso laso.
Siya kuzinikezela ngokupheleleyo ekuphuculeni iinzame zokwoneliseka kwabathengi, ukwandisa ixabiso elongezelelekileyo labathengi.
inyathelo lokuqala, ukukhalipha ekusebenziseni
umgangatho kunye nokusebenza ngokufanelekileyo
Umgangatho weenkonzo zabaThengi bubomi benkampani, ikwasisiseko apho umqeshwa ngamnye enza konke okusemandleni ethu ukwenza ukoneliseka kwabo bonke abathengi, ukuze iodolo nganye yenziwe ngokugqibeleleyo.
Gcina ingqondo evulekileyo, izimvo ezintsha, jonga iindlela ezintsha, qhubeka nokudlula.
Gcina ukuzinikezela kobungcali, ukusebenzisana, ukuqhuba kakuhle, ube nguvulindlela woshishino.
Qhubeka uphucula, yenza imveliso ekumgangatho ophezulu ngaphezulu kokulindelwe ngabathengi.
Ukukhuthaza ukusebenza kakuhle, impendulo ekhawulezileyo ekhawulezileyo kwiimfuno zabathengi.
Thatha umthengi njengeziko, kuphuhliso lweshishini njengesiqalo, ngokusekwe kwizibonelelo zabasebenzi, ngokuqhubekayo ukuphucula umgangatho weenkonzo zabathengi, ukubonelela ngendawo ebanzi yophuhliso kubasebenzi beshishini, ukufezekisa abathengi, amashishini, ukuphumelela kwabasebenzi- win imeko.
I-Wuxi Flyt iNew Energy Technology Co, Ltd., ngumenzi wobuchwephesha beenkqubo ezincinci zomoya kunye naphakathi kunye nezinto ezifanelekileyo.
Umgangatho we-2, indawo yeOfisi, i-712, iZhenze Road, i-Xuelang Subdistrict, iSithili seBinhu, Wuxi, China